Pakistana: Veloma Musharraf! · Global Voices teny Malagasy
Pakistana: Veloma Musharraf!
Voadika ny 20 Avrily 2018 2:55 GMT
(Fanamarihana: lahatoratra nivoaka tamin'ny Febroary 2008)
Satria efa mihamazava ny vokatry ny fifdianana ao Pakistana, miharihary àry fa tsy nahazo ny fahatokisan'ireo mpifidy i Musharraf na teo aza ny fanomezan-toky nataony. Manoratra i Crow's Nest, misaintsaina ireo mpiara-miasa amin'i Musharraf.
Tao amin'ny voka-pifidianana tamin'ity taona ity, 33 ireo minisitra taloha, izay niara niasa akaiky tamin'i Musharraf, no very seza. Niharan'ny fahaverezan-tseza ny PML-Q izay andrin'ny fitondrana teo aloha ary noheverina fa akaiky an'i Musharraf. Ny rikoriko sy ny tsy fitiavana an'i Mushrraf ary izay momba azy akaiky ihany koa no tena navoakan'ny voka-pifidianana.
Mandritra izany fotoana izany, mifanohitra tanteraka amin'izay nandrasana ary na teo aza ny tsy fahalavorariana, toa hita ho tsy nisy halatra sy fanodinkodinana ny fizotrin'ny fifidianana. Manoratra ny KO.
Toa diso fihevitra daholo ireo mpaneho hevitra ara-politika (izay tato ho ato dia avy ao Pakistana daholo) momba ny hoe feno halatra ny fifidianana….
Raha ny marina, nisy andrana fangalarana goavambe sy mangarahara nataon'ny governemanta teo aloha, ary mety hoe ampy izany raha nifanakaiky kokoa ny vokatra- lehibe loatra anefa ny elanelana tamin'ny tena valin'ny fitsapankevibahoaka ka tsy ampy tsotra izao ny fangalarana!…
Manana fitantaràna iray avy aminà mponina Britanika ny Picked Politics.
Nandany ny tontolo androko teny an-dalana aho, nitsidika ireo trano fandatsahambato isan-karazany. Niadam-pandeha ny fandatsaham-bato saingy nahitako vahoaka maro anefa tany amin'ny trano fandatsaham-bato sasany. Nanome toky ahy manokana ny nahitako ireo vehivavy maro an'isa nandeha nifidy. Nifanena taminà mponina Britanika mitovy amiko aho, izay mazoto ny hifidy. Nisy ihany koa ireo Pakistane mpifidy , Amerikanina ary Pakistane Aostralianina…..
Nampahazo aina ahy ny nifanena sy niresaka tamin'izy ireo fa tsy nahagaga ahy anefa izany. Lasa vaovao iraisam-pirenena ny politika ao Pakistana nandritra izay taona maro lasa izay, sady mifantoka ao amin'ny faritra ny mason'izao tontolo izao. Vonona ny hitondra fiovàna ireo mponina Eoropeanina sy Amerikanina manana fiaviana Pakistane ireo…..
Ao amin'ny Metroblogging Lahore, miady hevitra momba ireo fandresena sy faharesena ao an-tanàna ny bilaogy. Toa heverin'ny Pakistaney Mpitazana (The Pakistani Spectator ) fa manamarika ny fialàn'ny didy jadona ny vokatr'ity fifidianana ity. Manamafy i Pak Tea House fa ny fizotrin'ny fifdianana sy ny valiny dia marika mazava be amin'ny hoe nifidy ny hanifika izay rehetra mety ho endrika fanaovana an-tendrony ny vahoaka Pakistaney.
Nofoanan'izy ireo ny maodelin'i Musharraf amin'ny hoe fanalàna ireo ankolafy roa lehibe tsy ho eo amin'ny kianja politika; ary fametrahana ny tena demokrasia izay nataon'ny Islamisma sy ny fitondran-tompomenakely ao an-toerana ho takalonaina amin'ny alalan'ny governemanta tsy manana ankolafy ao an-toerana..
Felaka tehamaina eny amin'ny tavan'ny media rehetra erantany (sy ireo mpanohana azy, ireo fitaovan'ny miaramila erantany) ihany koa ireny fifidianana ireny, izay nandoko an'i Pakistana ho toy ny tanin-jeziky ny Islamika mpanao an-tendrony ary sahy miteny aho hoe fampihorohoroana..
Miarahaba am-pitandremana ireo vaovao i Sepia Mutiny, manontany raha tena fandresena ho an'ny vahoaka ao Pakistana tokoa ity.
Inona izany no ho hitantsika holalaovina ao Pakistana? Hisy fankalazana mandritra ny herinandro maro. Hanaratsy bebe kokoa an'i Musharraf isika mba hhanatsaratsaràna endrika. Ho hitan'ny vahoaka avy eo fa tsy izany mihitsy ilay demokrasian'izy ireo izay mety hoe ahitana “fikambanan-kery” marefo sy feno ady mandrakariva, ary hoe mbola voavidy vola toy ny tamin'ny voalohany foana ireo mpitarika azy ireo. Noho izany, tsy maintsy haka ny fahefana izay jeneraly vaovao miandraikitra ny tafika, toy ny nataon'ny Musharraf valo taona lasa izay..
7 andro izayPakistana